Shaararka Polo clothing Dharka xayaysiiska ah • farshaxanimada kumbuyuutarka ee P&M
Shaatiyo Polo Waxay aad ugu jecel yihiin aruurinta guga iyo xagaaga, kaliya ujeedooyin gaar ah maahee, sidoo kale ganacsiga iyo ujeeddooyinka xayeysiinta.
Maaliyado Polo ayaa si fudud loogu habeyn karaa shuruudaha shaqsiyadeed iyo waxyaabaha laga filayo iyada oo ay ku mahadsan yihiin adeegga kombiyuutarka, taas oo ah nooca calaamadaynta ugu waarta iyo quruxda badan.
Ku qanacsanaanta macaamiisha ayaa ah mudnaantayada.
Tani waa sababta aan u abuurnay dhammaan amarrada shaqsiyeynta iyada oo fiiro gaar ah la siinayo faahfaahin kasta. Waxaan bixinaa oo keliya tayo sare, laakiin sidoo kale adeeg xirfad leh. Qiimo daabacaadda kumbuyuutarkakuwaas oo funaanado buluug ah oo ka mid ah dharka ugu wanaagsan ee ay sabab u tahay naxwe ahaan, waxay kuxirantahay kakanaanta mashruuca iyo mugga. Si kastaba ha noqotee, qiimaha amarka ayaa lagu garan karaa bilowga asalka ah iyada oo lagu saleynayo qaabkii garaafka qaab dhismeedka xijaabka.
Shaararka Polo - qalabka heerka sare
Dharka xayeysiinta iyo dharka ayaa ah inay ahaadaan raaxo, isla mar ahaantaana ku habboon, haddii aan rabno in sumadda lagu aqoonsado tayo iyo xirfad.
Maaliyado Polo ah ayaa laga heli karaa annaga dukaan laga sameeyay agab tayo sare leh oo la jaan qaada isticmaalaha una oggolaanaya isaga xorriyadda dhaqdhaqaaqa.
Dhamaadka qurxinta qalabka ayaa ka dhigaya dhar ka shaqeyn doona warshado badan oo kala duwan. Waxay u egtahay mid wanaagsan mid kastoo daabacan. Kala badh ka sameysan dharka culus ayaa adag inay waxyeelleeyaan. Ku dhaqitaanka si isdaba joog ah ma keenayso wax khatar ah. Dharku waxay hayaan hantidooda muddo dheer, taas oo dammaanad ka qaadaysa faa'iidada wax iibsashada. Waa soo jeedin ku habboon dadka ku maalgeliya miisaaniyadooda si caqli gal ah.
Shaatiyada Polo waxaa si xamaasad leh loogu isticmaalaa dharka shaqaalaha, gaar ahaan go'an, tusaale ahaan waxyaabaha ay wataan dharka xilliyada qabow, sida tusaale ahaan. dhogorta, laakiin sidoo kale loola dhaqmo sidii qalab shirkadeed oo loogu talagalay macaamiisha ama qandaraasleyaasha.
Isticmaalkooda dharka daabacaadda sidoo kale waa lagu dabaqi karaa inta lagu gudajiro noocyada kala duwan ee dhacdooyinka ama abaalmarin ahaan tartamada. Dhammaanteed waxay kuxiran tahay fikradda sumadda. Sidaad arki karto, kani waa hab la heli karo oo lagu helo xiiso iyo aqoonsi dhagaystayaashaada.
Noocyo farabadan oo noocyo ah
Maaliyadaha polo waxaa ka mid ah moodooyinka ragga, haweenka, carruurta iyo kuwa guud - unisex.
Moodhadhka oo dhan waxaa lagu heli karaa midabyo kaladuwan oo kaladuwan, sidaas awgeedna u oggolaanaya xulashada funaanad si ay duruufaha iyo meesha u galaan, taas oo iyaduna ah faa iido weyn. Moodooyinka dib-u-milicsigu waxay ka kooban yihiin koox gaar ah oo alaabooyin ah, taas oo ay ugu wacan tahay in la kordhiyo heerka nabadgelyada ee goobta shaqada.
Kooxdayadu waa ku faraxsanaan doonaan inay kaa caawiyaan inaad doorato badeecada saxda ah oo aad shaqsi ahaan sameysato. Dhamaan daabacadaha lagu sameeyo gurigayaga xargaha waxaa lagu sameeyaa salka ku haya teknoolojiyadda casriga ah. Waxaan leenahay garoon mashiin sareeya oo na siiya shaqo hufan iyo tayo sare u leh macaamiisheena.
Moodooyinka oo dhan ayaa laga iibsan karaa dukaankayaga internetka www.pm.com.pl ama dukaankeena ku yaal Allegro "PRODUCER-BHP". Haddii aad rabto inaad aragto farshaxanimada oo aad wax ka ogaato samballada tusaalaha ah ee xiisaha leh, fadlan booqo tabkeena wax intaa ka badan firmie.
sida funaanada polotaas oo sifiican ula socota shaarka polomaxaa lagu xidhaa shaadhka polomaxaa lagu xidhaa shaadhka polomaxaa lagu sameeyaa shaarka polomeesha shaati wanaagsan oo Polo ahsida loo xirto shaararka polosida loo dhaqo shaararka polosida loo shaashado funaanadaha polosida loo laabo shaararka polowaa maxay nooca dhididka ee shaati polo ahmuxuu yahay dhererka shaararka polomuxuu yahay midabka shaadhka polomaxaa kabo shaati polo ahmaxaa surwaal u ah shaati polo ahfunaanadaha raggashaati poloshaararka adidas polo oo daabacanshaararka polo ee haweenkaShaatiyada polo ee haweenka oo daabacanshaararka shirkadda polo oo daabacanmiro ka mid ah shaatiyada loom polo oo daabacanfunaanadaha polo meeshashaararka polo sida loo xirtoshaararka polo lacostefunaanadaha raggaFunaanado Polo ragga Lacostefunaanadaha ragga ee polo oo daabacanku shaqee shaatiyada polo oo daabacanshaararka polo oo daabacanfunaanado polo leh daabacaadda 'esro'shaararka polo oo leh daabacaadda Bydgoszczfunaanadaha polo leh daabacaad qiimo lehshaararka polo oo leh daabacaadda dumarkashaararka polo oo daabacan loogu talagalay carruurtafunaanadaha polo oo leh shirkad daabacanshaararka polo oo leh daabacaad jireedfunaanado polo leh daabacaadda Krakowshaararka polo oo daabacan doonshaararka polo oo leh daabacaadda Lublinshaararka polo oo leh daabacaadda ilaalintashaararka polo oo ay ku daabacan tahay kalkaaliso caafimaadfunaanado polo leh daabacaadda poznańfunaanado polo leh daabacaaddii Warsawshaararka polo oo leh shaashadaadafunaanado polo leh daabacaad wrocławshaati-polo leh daabacaad kuu gaar ahfunaanado polo leh daabacaad u gaar ahfunaanado polo leh shaashaddaada Warsawfunaanadaha poloT-shaati oo leh daabacaadda polo kuu gaar ah